kubudikidza Jennifer Finney
Last updated: Chivabvu. 15 2019 | 2 Maminitsi verenga
Nepo isu mufananidzo zvose kuti mugumo anoita basa rinokosha pakutsauka murudo, dzimwe nguva zvatinoita zvinogona kutaura zvinonzwika. pazasi, isu vakafukunura dzakasiyana dzaunogona kuwana rudo hwako.
Little Known Way #1: Iva Akagadzirira Love
A ukama zvinotora nguva, kubatikana, uye munjodzi. The kiyi ukama hwakanaka uye hunobudirira ndewokuda pachako kutanga, rudo urwu Akakubvumidza kuti ude mumwe munhu zvechokwadi. ukama Strong, pamwe pachako uye nevamwe, Makavakwa pamusoro chivimbo, kuvimbika, uye kutaurirana.
Little Known Way #2: Chiziva Ziva Standards Your
Nepo zviri chandakukanganisira kutonga munhu zvachose kuburikidza zvavaikanganisa, zvakakosha miganhu. Tose tinoziva kuti pane dzimwe pfungwa uye nemaitiro aigona kuti kuvhiringidza ukama yenyu. Tinozivawo kuti pane dzimwe tsika uye unhu kuti tinoda uye vanoda muukama. Kuziva avo kuchabatsira kuti pave nechiPurotesitendi yokuwana yako kukosha zvimwe.
Little Known Way #3: Ziva kusiyana kwakaita Rudo Munhu uye Rudo Rudo Kwavo
Hapana inofara kuva murudo; zvisinei, dzimwe nguva kunzwa ichi akamukunda pfungwa dzechokwadi kwedu mudiwa. Zvakakosha kuti unyatsoteerera kana unogona kusiyanisa pakati kwomunhu chinoumba unhu uye vaya iwe kumanikidza pavo.
Little Known Way #4: Ururamiswe Place Panguva Yakakodzera
Kune dzimwe nzvimbo uko isu kungonzwa sokuti tiri kwedu maatomu akafanana. Kana zviri paawa kufara neshamwari, pane imwe konzati kana unyanzvi ratidza, kana pane imwe kirasi, aripo. unhu Your vachapenya, Kuswedera vanhu kwamuri.
Little Known Way #5: Edza nokuti Emotional Intimacy pamberi Intimacy Chaiko
With kuwana “rudo hwako”, chinhu chisungo mupfungwa kunokosha. Nepo kumhanyira mumuviri ukama hakuna hako kuipa chinhu, zvinogona kuita mupfungwa chisungo kuoma kufamba.
Little Known Way #6: kuvimba Yourself
Teerera dumbu rako, wakasununguka kutora nguva yako, uye mwoyo murefu zvamakatonga. Panguva imwe, zvakakosha kuti tirambe pachena pfungwa itsva uye zvaanonzwisisa rudo.
Kana kurohwa, izvi zvinozivikanwa zvishoma nzira, kana zvose – zvakakosha ukasarasa rudo rwechokwadi. Nokuti kamwe uine naro, ndiye kunzwa munyika zvikuru.
Ngwarira Kuva Professional Online Dater
Kuva Amazing First Date
Mapuraneti anogona kufanoona sei Your Love Destiny
Sei Get muna Kwemanzwiro nokuda Love?
Chakavanzika ane Kiss Great
© Copyright 2019 Date My Pet. yaakaita kubudikidza 8celerate Studio